Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-Taliska Mareykanka ee AFRICOM oo wax laga weydiiyay Howlgalkooda Soomaaliya
Gen Thomas ayaa waxa uu sheegay Howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya in uu qeyb ka yahay dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo Soomaaliya, si dadka Soomaaliyeed ay u dhameystirtaan dhismaha Ciidanka Qaranka.
Wuxuu sheegay in Al-shabaab ay qatar ku yihiin Soomaaliya iyo gobolka, isaga oo tusaale u soo qaatay qaraxii 14-kii October sanadkii hore ka dhacay isgoyska Zoobe , kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux.
“Ma dhahayo qatar way dhamaatay laakiin inaga oo ku saleyneyna qaar ka mid ah howlaha aan qabanay oo ay barbar socdaan wada shaqeynta saaxiibadeena kale ee caalamka ayaan waxa aan dhihi karnaa taasi waxa ay sababtay in Shabaab ay maamulaan dhul yar, 14-kii October waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho, kaddib waxaa ay maqnaayeen Afar bil hadana dhamaadkii February Muqdisho ayeey qarax ka geysteen, weli kooxdan si buuxda loogama guuleysan, laakiin waxaa aan rabno hada ayaa ah in ciidamada qalabka ay sida ay maareeyaan sifeynta kooxdan.
Taliyaha ayaa meesha ka saaray sheegashada ah in weerarkii Bariirre ka dhacay sanadkii hore ay ku dhinteen dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen Dumar iyo Carruur, isaga oo intaa ku daray in baaritaan arintaa lagu sameeyay lagu ogaaday in taasi aysan aheyn wax dhacay.
Ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Afrika gaar ahaan Soomaaliya ayaa ka taageera Ciidamada Dowladda Federaalka dhinacyada tababarka iyo Howlgalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Mareykanka, ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay ka gaysanyaan Koonfurta Soomaaliya, iyaga oo dilay Saraakiil badan oo Shabaab ka tirsan.